Imvelaphi yeCoriander iqala kufutshane nase Mpuma. Ubungqina bokuqala besi sityalo, kunye nokulinywa ze sisetyenziswe ngabantu buqala kwiminyaka engama 6000 eyadlulayo kumazwe ase Egypt ukuya eTurkey, kumbindi Asia kunye nase Persia. Emva koku, ukusetyenziswa kwe coriander sele kunwenwele nakumazwe ase India nase China kwiminyaka engaphaya kwama 3000 eyadlulayo yaze ethubeni yanwenwela naku Mzantsi Europe. Namhlanje icoriander isetyenziswa kwaye ilinywa kwihlabathi lonke jikelele.
Igama Eliqhelekileyo: Coriander, Dhania or Cilantro
Isityalo se coriander sinamagqbi athambileyo kwaye sikhula kanye ngonyaka kwaye singakhua sifikelele kwi mitha enye ukuba siyekwe sakhula sade sanembewu. Iintyatyabo zayo zimhlophe okanye zibe pinki okhanyayo. Ivelisa isiqhamo esi ovali ukuya kwesirawndi ukumila. Esi siqhamo siqulathe imbewu ye coriander nesetyenziselwa ukuqhola ukutya okanye ukwenza amayeza.
Iziqu ze coriander namagqabi ayo asematsha, kwakunye neziqhamo zayo ezincinane kunye nembewu eyomisiweyo zisetyenziswa ekutyeni okuninzi njengesiqholo. Iziqhamo zikwasetyenziselwa ukwenza i-oli ezizi essential oils kunye ne fatty oils nezisetyenziswa kwimakethi yamayeza endalo kunye nakushishino lokwenza ukutya. Le oli isetyenziswa nanjenge sibulala ntsholongwane emzimbeni ikwanceda nasekucoleni ukutya esiswini. Kuthiwa iyanceda nasekuthomalaliseni ingqondo xa iphantsi koxinzelelo.
Icoriander ikhula kakuhle kumhlaba oyisanti okwaziyo ukufunxa amanzi none pH ephakathi kwesi 6.0 kunye nesi 7.5. Kwimihlaba enzima, kungcono ukuba uwuphakamisele phezulu umhlaba wenze nemisee ukuncedisana namanzi ukuba akwazi ukutshona kakuhle.
Ngaphambi kokuba umhlaba ulungiselwele ukutyala, kufuneka kuthathwe isampuli yomhlaba isiwe elaborethri ukuze ihlolelwe izinongo. Umhlaba kufuneka uhlakulwe ukuze ungaqini, oku kungenziwa kumhlaba ongaphezulu kangangama 500 mm ubunzul. Kufuneka kugalelwe ilime ukuze kulungiswe ipH yomhlaba, kugalelwe ne manyolo okanye umgquba ize ihlakulelwe kuma 400 mm omhlaba ongaphezulu. Oku kungenziwa kwisithuba seveki ezine ukuya kwezintlani ngaphambi kokutyala. Kwiintsuku zokugqibela ngaphambi kokutyala, galela iintsalela ze elementi kunye nesichumiso saphambi kokutyala uze usebenzise idisc harrow okanye irotavator kuma 20 cm omhlaba ongaphezulu. Oku kunceda ekusiphuleni kwakhula ebesele liqala ukukhula. Ukuba kuza kwenziwa imisele, nayo kufanele yenziwe kweli nqanaba nomhlaba ube sele ulungiselelwa ukutyalwa.
Icoriander ikhula kakuhle kwiindawo ezipholileyo nezine mozulu enamaqondo aphantsi. Iqhuba kakuhle kakhulu kumaqondo obushushu aphakathi kwe 18°C kunye nama 27°C. Ukuba amaqondo obushushu aphezulu kakhulu, isityalo sizakukhawuleza sikhule iintanga kufutshane ngaphambi kokuba sibe kanti sikhule ngokwaneleyo ukuba singavelisa amagqabi okanye imbewu ukuba siyekwe sakhula iintyatyambo.
Zininzi iindidi zesityalo se coriander, kodwa igcuntswana lezona ndidi zisetyenziselwa intengiso zezi: Caribe, Chinese, Leisure, Long Standing, Slow Bolt, Santos.
Kodwa ke, kungcono ukufumana iingcebiso kwi extension officer ekufutshane nawe kunye nengcali yembewu, nenokunika iinkcukacha mayelana neyona ndidi inokulungela indawo ofuna ukutyala kuyo kunye nabantu oceba ukubathengisela. Ezinye iindidi zilungele imveliso yamagqabi logama ezinye zilungele ukuvelisa imbewu kunye ne oli.